बलिउड आएका साउथका यी १५ स्टार, कोही हिट त कोही फ्लप – Medianp
बलिउड आएका साउथका यी १५ स्टार, कोही हिट त कोही फ्लप
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: आइतबार, पुष १६, २०७४१४:५४
काठमाडौं, १६ पुस । साउथका सुपरस्टार रजनीकान्तले आइतबार नयाँ राजनीतिक पार्टी बनाउने घोषणा गरेका छन् । उनले यो भन्दा पहिले नै ३१ डिसेम्बरमा आफ्नो प्लानबारे बताउने बताएका थिए । उनले तामिलनाडुमा आफ्नो पार्टीले विधानसभा चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने बताएका छन् । रजनीकान्तसँगै केही यस्ता स्टार छन्, जसले बलिउड फिल्ममा काम गरेका छन् । ती मध्ये कही हिट भएका छन् भने कोही फ्लप ।
साउथ फिल्मका सुपरस्टार रजनीकान्तले बलिउडमा १९८३ मा फिल्म ‘अन्धा कानून’ बाट डेब्यू गरेका थिए । त्यसपछि उनले ‘गिरफ्तार’, ‘दोस्ती दुश्मनी’, ‘गैर कानूनी’, ‘भ्रष्टाचार’, ‘चालबाज’, ‘हम’ लगायतका फिल्ममा काम गरेका छन् । यी मध्ये कही फिल्म सुपरहिट भएका छन् ।
२. श्रुति हासन
उनले २००९ मा आएको फिल्म ‘लकी’ बाट बलिउडमा डेब्यू गरेकी थिइन् । यसका साथै उनले ‘दिल तो बच्चा है जी’, ‘डि–डे’, ‘गब्बर इज ब्याक’, ‘वेलकम व्याक’ लगायतका बलिउड फिल्ममा काम गरकी छन् । उनका कुनैपनि बलिउड फिल्म हिट भएनन् ।
३. श्रिया सरन
श्रियाले २००३ मा आएको फिल्म ‘तुझे मेरी कसम’ बाट बलिउडमा डेब्यू गरेकी थिइन् । यसका साथै उनले ‘आवारापन’, ‘दृश्यम’ मा काम गरिन् । उनी अहिले पनि बलिउडमा चलेकी अभिनेत्री हुन् ।
धनुषले बलिउड फिल्म ‘रांझडा’ मा काम गरेका छन् । उनले साउथमा थुप्रै हिट फिल्म दिएका छन् ।
५. तृषा कृष्णन
उनले २०१० मा अक्षयकुमारको फिल्म ‘खट्टा–मिठा’बाठ बलिउडमा डेब्यू गररिन् । यो फिल्म सुपरफ्लप भएको थियो । उनले १९९९ मा आएको तामिल फिल्म ‘जोडी’बाट डेब्यू गरेकी थिइन् ।
रामचरण साउथका चल्तीका नायक हुन् । उनले २००३ मा आएको बलिउड फिल्म ‘जन्जिर’ मा काम गरेका छन् । जुन फिल्म फ्लप भएको थियो । त्यसपछि उनले कुनैपनि बलिउड फिल्ममा काम गरेका छैनन् ।
७. काजल आग्रवाल
काजलले २००४ मा आएको फिल्म ‘क्यो हो गया ना’ बाट बलिउडमा डेब्यू गरेकी थिइन् । उनले ‘सिंघम’ र ‘स्पेशल २६’ मा समेत काम गरिन् । यी फिल्म हिट भएपनि काजलले बलिउडमा पहिचान बनाउन सकिनन् ।
८. कमल हासन
कमलले साउथका साथै बलिउडका समेत केही हिट फिल्ममा काम गरेका छन् । उनले फिल्म ‘एक दुजे के लिए’, ‘सनम तेरी कसम’, ‘सदमा’, ‘राज तिलक’, ‘गिरफ्तार’ लगायतका बलिउड फिल्ममा काम गरेका छन् ।
९. आर. माधवन
उनले बलिउडका केही फिल्ममा काम गरेका छन् । तर उनलाई सफलता पनि मिल्यो । उनले ‘रहना है तेरे दि में’, ‘दिल विल प्यार’, ‘गुरु’, ‘हल्ला बोल’, ‘थ्री इडियट्स’, ‘तनु वेड्स मनु’ लगायतका फिल्ममा काम गरेका छन् । उनले कही साउथ फिल्ममा समेत काम गरेका छन् ।
उनले बलिउडमा फिल्म ‘हिम्मतवाला’ बाट डेब्यू गरेकी थिइन् । यसका साथै ‘हमशक्ल’ र ‘एन्टरटेनमेन्ट’ मा समेत काम गरेकी छन् । अजय देवगन, सैफ अली खान र अक्षयकुमार जस्ता सुपरस्टारसँग काम गरेपनि उनले बलिउडमा सफलता हात पार्न सकिनन् ।
११. राम्या कृष्ण
उनले १९८८ मा आएको फिल्म ‘दयावान’ बाट बलिउडमा डेब्यू गरिन् । त्यसपछि उनले ‘बनारसी बाबू’, ‘लोहा’, ‘चाहत’, ‘परम्परा’, ‘वजुद’ लगायका फिल्ममा काम गरिन् । तर बलिउडमा पहिचान भने बनाउन सकिनन् ।
उनले बलिउड फिल्म ‘रोजा’, ‘बम्बे’, ‘सात रंग के सपने’, ‘सपने’ लगायतमा काम गरेका छन् । उनी सफल पनि रहे ।
१३. भूमिका चावला
भूमिकाले २००३ मा आएको फिल्म ‘तेरे नाम’ बाट बलिउडमा पाइला राखिन् । फिल्मको सफलतासँगै उनले ‘रन’, ‘दिल ने जिसे अपना कहा’, ‘सिलसिले’, ‘दिल जो भी कहे’, ‘फ्यामेली’, ‘गान्धी माइ फादर’, ‘लभ यू आलिया’, ‘एमएस धोनीः द अनटोल्ड स्टोरी’ लगायतका फिल्ममा काम गरिन् । तर उनले बलिउडमा स्टारडम बनाउन भने सकिनन् ।
१४. प्रकाश राज
प्रकाशले साउथका फिल्ममा अलग–अलग खालका भूमिका निभाएका छन् । उनले बलिउड फिल्ममा पनि अलग–अलग रोल निभाएका छन् । उनका रोल दर्शकले मन पराएका छन । उनले ‘वान्टेड’, ‘दबंग–२’, ‘जंजीर’, ‘पुलिसगिरी’, ‘सिंघम’, ‘हिरोपन्थी’ लगायतका बलिउड फिल्ममा काम गरेका छन् ।
१५. पृथ्वीराज सकुमारन
पृथ्वीराजले बलिउडका केही फिल्ममा काम गरे । तर सफलता चाहिँ प्राप्त गर्न सकेनन् । उनले बलिउड फिल्म ‘अइय्या’, ‘औरंगबेज’, ‘नाम शबाना’मा काम गरेका छन् । एजेन्सी
चोरीको आरोपमा पक्राउ
हनिमुनबाट लिक भयो निक र प्रियंकाको यस्तो फोटो र भिडियो
यी हुन् टेलिभिजनमा संस्कारी देखिने छाडा अभिनेत्रीहरु, जो नशामा उन्मात छन्